Fampisehoana mitarika ivelany ivelany, Fampirantiana mivoatra ivelany ivelany, Fampisehoana ivelany ivelany Ho an'ny dokam-barotra, fampisehoana marika angovo azo avy any Sina
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Fampisehoana ivelany ivelany, Efijery ivelany, Fampisehoana Led Led, ,Fampisehoana angovo nojerena, Birao fampisehoana LED
Home > Products > Miseho ny fampisehoana LED > Fampisehoana ivelany ivelany
Ny vokatra avy amin'ny Fampisehoana ivelany ivelany , mpanofana manokana avy any Shina, Fampisehoana ivelany ivelany , Efijery ivelany mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Fampisehoana Led Led R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Ny diode tarika SMD efa mandroso sy ny famolavolana PCB dia nalain'ny Priva PH6 Outdoor full color advertising LED display screen na teknolojia avo lenta. Miorina, mateza ary famirapiratra avo dia fampisehoana amin'ny rindrina lahatsary ivelany noho ny teknika SMD. Azo tsikaritraina fa ao amin'ny masoandro...
Ny rindrin'ny horonantsary any ivelany dia feno fahatoniana, mateza ary hazavana avo rehefa mampiasa teknika SMD. Priva Outdoor Led Display Screen dia azo jerena amin'ny tara-masoandro mivantana tsy mitovy amin'ny rindrina lahatsary notarihan'ny hafa. Ny efitrano fampirantiana feno loko ivelany ivelany...
taratasy fanamarinana: ISO
PH16 Outdoor DIP Led Displays dia ampiasaina mampiasa diode fitarika ambony sy famolavolana PCB ary teknika famokarana avo lenta, izay mahatonga ny tontolon'ny fantsom-bolo fitarihana ambany kokoa noho ny fanjifana herinaratra, sary mazava kokoa sy mazava kokoa, tsy misy dikany sy jiro tsy mazava. Ny fisehoana...
Miaraka amin'ny tombony mampiavaka ny hazavana avo, ny fahaizan-jiro avo, ny zoro fijerena lavitra, ny fahitana lavitra be, ny mazava mazava loko, ny fanjifana herinaratra tsara, ny fitoniana tsara, ny faharetana maharitra, ny fampidirana ny modular modely hamoronana ny habeny mora kalitao, ny LED Digital...
Shina Fampisehoana ivelany ivelany mpamatsy
Fampisehoana LED ivelany ivelany sy ny fisehoana LED
Priva ivelan'ny rindrin'ny rindrambaiko LED ivelan'ny rindrina ho an'ny rindranasa ivelany dia mody miorina amin'ny vahaolana amin'ny rindrina LED. Ny teknolojia ampiasaina amin'ny dokam-barotra LED mampiseho DIP. Ny karazana sy ny habe napetraky ny birao namboarina safidy.
Miezaka izahay hamorona vokatra izay mandanjalanja ny tontolo iainana. ny efamira LED ivelany dia ambany ihany koa ny fanjifana herinaratra na tahiry engoris.
Ny fampisehoantsika LED ivelany dia mifanentana amin'ny endrika fampidirana isan-karazany, toy ny mpilalao DVD, cable TV, internet ary intranet sns.
Ireo dia rindrina rindrambaiko fampisehoana LED namboarina manokana, ny efijery fampisehoana LED rehetra dia mifanaraka amin'ny fika piksel, fametrahana vahaolana, habe, endriny sns. Ny rindrina fampisehoana LED dia mankafy fiainana lava, izy ireo dia toetr'andro azo antoka ary afaka mandefitra ny vovoka, ny hamandoana na ny orana.
Fampisehoana angovo nojerena
Fampisehoana ivelany ivelany P25
Fampisehoana Grille ivelany ivelany